Ndị na-emepụta ngwaahịa - Ụlọ ọrụ ngwaahịa China, ndị na-eweta ngwaahịa
Otu setịpụrụ nwere shelf abụọ na-ese n'elu mmiri, ngwakọta ndị ọzọ ga-ekwe omume maka ebe ọ bụla dịka ịchọrọ.
Shelf Nkuku Mgbidi nwere ogwe aka anọ
Mee ka akụkụ nke ụlọ gị nwee oge iji were shelf akuku akụkụ osisi SS na-enwu.
A haziri shelf nkuku ndị a iji gboo mkpa maka ịdị mma, arụ ọrụ, nkecha na obere arịa ụlọ dị ọnụ ala maka ụlọ, mepụta ohere nchekwa dị iche iche iji hazie ihe ndị mara mma.
Nhazi nke na-ese n'elu mmiri na-eme ka o doo anya na ọ ga-eme ka oghere ala gị ghe oghe ma doo anya, na-ebelata nsogbu gburugburu ụlọ gị.
Jikọta ya na ọmarịcha MDF na braket ọla ojii, na-eme ka ha dịkwuo iche ma dabara n'ụdị ụlọ ọgbara ọhụrụ ma ọ bụ nke siri ike.
A na-arụpụta SS Wooden Wall Mount Corner Shelf site na ihe MDF na-enye ya ogologo ndụ na ogologo ndụ.Bịa n'ọtụtụ agba maka nhazi dị mfe, ọcha, ojii, ukpa, cherry na maple.Ihe nkuku nke na-ese n'elu mmiri nwere ụdị ọgbara ọhụrụ nke ga-adabara ihe ndozi ọ bụla.Ọ na-achọkwa mma ma na-arụ ọrụ maka ụlọ gị, ụlọ ọrụ, ma ọ bụ ime ụlọ.A na-eme ka mgbakọ dị mfe na ntụgharị-na-tube imejuputa atumatu, ebe ọ dịghị ngwaọrụ achọrọ.Usoro dị mfe site n'ịtụgharị ma na-atụgharị okporo osisi megide mbadamba ma mee ka ha sie ike.
Ntuziaka nlekọta: jiri akwa dị ọcha hichaa ma zere iji kemịkal siri ike iji gbochie mmebi nke shelves.